न्याय किनवेच गर्नु कानून ब्यवसाय जस्तो गरिमामय पेशामा शोभनिय हुन्छ ?-NepalKanoon.com
न्याय किनवेच गर्नु कानून ब्यवसाय जस्तो गरिमामय पेशामा शोभनिय हुन्छ ?
अदालत न्याय दिनको लागि सृजना गरिएको संस्था हो । कानून जनताले जनताको हितमा सृजना गर्दछन, त्यसका औपचारिक पक्ष छुट्टै होलान तर न्यायलयले वनेका तिनै जनताको हित र उन्नती चाहाने कानूको ब्याख्या गर्ने हो र जनता र समग्र समाजलाई न्याय, सुख र आनन्दको अनुभूती गराउने हो ।
कानून ब्यवसायीको ठेक्का होइन कुनै मुद्दा जिताउने अनि कानून ब्यवसायीले गैर जिम्मेवार भएका कारण कसैले मुद्दा हार्ने अवस्था समेत बन्न हुदैन ।
कानून ब्यवसायीले गर्ने जिम्मेवारी यो हो अदालत समक्ष आफ्नो पक्षका प्रमाणहरुलाई ब्यवस्थित रुपमा पेश गर्ने, प्रमाण, कानून, र तर्क द्वारा पक्षको हुने सम्मको हितमा न्याय सम्पादन गर्ने । न्यायधिसमा भएका अस्पस्टता र विषयलाई प्रष्ट पर्ने काम नै कानून ब्यवसायीको हो जस्ले प्रमाण, कानून, र उपयुक्त तर्कहरु हुदा हुदै आफ्नो पक्षले अनावाश्यक अन्याय वेहोर्न नपरोस ।
बर्तमान विश्वकानै अदालतलाई हर्ने हो भने धेरै जसो अदालतमानै विभिन्न चलखेलको आधारमा मुद्दा हेरिने गलत कार्यहरु पाइनछ । यस्ता समाचार धेरै नै भेटिन्छन ।
न्यायधिसले आफ्नो सिमामा रहेकर जिम्मेवार भएर कार्य गर्नु र कानून ब्यवसायीको पेशागत सिमामा रहेर कानून ब्यवसायीले कार्य गर्नु नै सही न्याय सम्पादनको पक्ष हो । जहाँकी न्याय प्रदान गर्ने पक्षमा न्यायधिसको ब्याक्तिगत विचार, कानून ब्यवसायीको इच्छा र अन्य पक्ष भन्दा मुद्दाका प्रमाण, कानून, त्यसलाई पुष्टि गर्ने तर्क र सिद्धान्तको समयोजन हुनु पर्दछ ।
एक जना कानून ब्यवसायी दिपक राज जोसी समाजिक संजाल फेसवुकमा लेख्नु हुन्छ :
जो पहुँच वालाको पक्षमा वोल्ने र उनिहरुको पेशा गर्ने उदेश्यले सृजना भएको असल वकिल कानून चिन्छ ठुलो वकिल न्यायाधिस चिन्छ भन्ने सुनेको थिए, हिजो यस्तै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सरुवा भयर आउनु भयका फलाना माननीय न्यायाधिश ज्युलाइ कसले चिन्छ ? भन्दै सोध्न आउने वकिलसापलाई भेट्दा लाग्यो जुन देशका औपचारिक विद्वान जीहरु कानूनको सहारा नलिई चोरबाटोबाट न्याय सम्पादन गराउने तरखरमा छन् त्यो देशमा न्याय कता होला ….? त्यसो भय ….. न्यायालयमा भ्रस्टाचार गराउने को ? (जस्ताको तस्तै)
यसले पनि के प्रस्ट परेको छ भने कतिपय कानून ब्यवसायीहरु न्याय सम्पादनमा पेसागत पक्षलाई महत्व दिन भन्दा, प्रमाण, कानून र तर्कको भन्दा अनैतिक र पेसागत अचरण भन्दा वाहिर रहेर कार्य गरि रहेका छन ।
संग–संगै अर्को प्रमाणीत भएको पक्ष पनि के हो भने यो कानून ब्यवसायिको मात्र समलग्नतामा सम्भव छैन र प्रष्ट हुन्छ की न्यायधिसहरु पनि यस्ता कार्यमा संलग्न छन ।
के कुनै पेशागत आचरण विपरित चलखेल गरेर न्यायलाई किनवेच गर्नु कानून ब्यवसाय जस्तो गरिमामय पेशामा सोभनिय हुन्छ ? अनि यस्तो गरेमा आफूलाई नै थाहा भएको अन्न्याय भएको पक्षको अन्तर मनवाट नै निस्किएको पिडा र आँसुले पाल्दैन त्यस्ता कानुन ब्यवसायी र न्यायधिसको ? तसर्थ बहसमा र न्याय समपादन गर्दा कानून ब्यवसायी र न्यायधिसले अनावाश्यक चलखेल त प्रश्न नै भएन आफ्नो सत्य मनवाट सोच्नु पर्ने हुन्छ जसले कसैलाई अन्याय गर्दैन । कानूनले अन्याय गर्ने ठाउँ राखेको हुदैन ।
एकातर्फ पेशा, जिम्मेवारीमा गरिएको पाप र अनियमित कार्यको मोक्ष मन्दिर धाएर हुन्न, धर्म त्यहिहो जो आ–आफ्नो जिम्मेवारीलाई सत्य मनको साथमा सम्पन्न गर्दछ ।